Inona no atao hoe SaaS? | Martech Zone fanafohezan-teny
Martech Zone » fanafohezan-teny » Fanafohezana manomboka amin'ny S	» SaaS
SaaS no fanafohezana ny Software toy ny Service.
SaaS dia rindrambaiko nampiantranoana ny rahona avy amin'ny orinasa iray hafa. Ny orinasam-barotra dia matetika mampiasa SaaS mba ahafahan'ny fiaraha-miasa mora kokoa. Mitahiry fampahalalana momba ny rahona izy io ary misy ohatra ny Google Apps, Salesforce, ary Dropbox.